१८ आश्विन २०७७, आईतवार ११:२५
पाल्पा , असोज १८ । युवा सजगता अभियान पाल्पाले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधार माग गर्दै अनशन बसेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । अनसनको २१ औ दिन पुगीसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै युवा सजगता अभियान पाल्पाले आइतबार प्रदर्शन गरेको हो ।
चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै अनशनरत केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गरिएको अभियानका जिल्ला संयोजक कृष्ण अर्यालले बताए । कार्यक्रममा नेविसंघका केन्द्रिय सदस्य हरिवोल भट्टराई, नेविसंघ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाका इकाई उपसभापति पुण्य सुवेदी, संघका कार्यवाहक ईकाइ सभापति सुवास गैरे, स्वतन्त्र पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव जीवलाल सुवेदी लगायतले १९ पटकसम्म अनशन बस्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले सत्याग्रहीको जीवन रक्षा गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् । उनीहरुले जीवन नै दाउमा राखेर चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा.केसी लागेकाले सबै क्षेत्रबाट दबाबमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जुम्लामा १९ औं चरणको सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) छन् । प्रदर्शनमा अनसनको २१ औ दिन पुगीसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखएकोमा प्रदर्शनकारीहरुले खेद जनाएका थिए ।